7 xeeladood oo kuu sahli kara shukaansiga baraha bulshada - BBC News Somali
7 xeeladood oo kuu sahli kara shukaansiga baraha bulshada
Waa la cusbooneysiiyay 11 Maajo 2020
Shukaansiga baraha bulshada ayaa mararka qaar farxad kuu horseedi kara
Inta badan dhalinyarada waxay lamaanahooda kula kulmaan bogagga Internet-ka, gaar ahaan baraha xiriirka bulshada, hase yeeshee badankood waxay la'yihiin xirfaddii ay guul uga soo hoyin lahaayeen xiriirkooda noocaas ku unkama.
Marka laga soo tago in aad baraha bulshada u gasho sidii aad jacayl u sameysan lahayd, ma leedahay xeeladdii kaa caawin lahayd arrintaas?
Marka loo eego xogta iyo xaqiiqada baaritaan ee laga sameeyey baraha shukaansiga ayaa lagu ogaaday in 91 milyan oo qof ay isticmaalaan shabakadaha shukaansiga ee loo yaqaan dating Apps, qaybo badan oo ka mid ah dadkan ayaan la xaqiijin karin taariikhdooda saxda ah.
Waddanka UK, badhitaan ay shirkadda YouGov ka sameysay Shukaansiga baraha bulshada waxaa lagu ogaaday in 10% dadka waddankaasi ay isticmaalaan baraha shukaansiga, halka in yar oo ka mid ah dadkan ay kala kulmeen wehel Jaceyl goobtan.
Maxaad u samayn kartaa jacayl dartii?
Zoe Strimpel, oo taariikhyahanka Jaamacadda Sussex iyo qoraaga Man Deit, iyo Suzie Hayman, oo ah xirfadle cafimaad iyo la-taliyaha xidhiidhka, ayaa isku soo dubbariday fariimo ku saabsan shukaansi oo kaa caawin kara inaad hesho feejignaanta saxda ah.
1. Ha shukaansi tagin oo ka fogow shruudahan
Marka aad galeyso baraha shukaansiga waa inaad taxadarto
Hadii aadan ka helin, jooji, hadii aadan jeclayn qof, mar danbe ha arkin. isku day walba waa halis, waxay keentaa daal, waxay kugu beertaa murugo naftaada ah iyo asxaabtaadaba.
2. Waxa aad ka fakarayso aamin
Haddii aad ku fakareyso in shukaansigaaga uusan daacad ahayd isla markiiba ka fogow
Haddii aad ogaato digniin mar kasta, u qaado si dhab ah.
Waxaa jirra dareen ah in laga fikiro: 'waa qaladkayga'.
3. Daraasad dhawaan la sameeyey ayaa tilmaamaysa in markii ay timaaddo fariimaha lasyku diro, la yareeyo
Go for quality rather than quantity - a few good conversations are more likely to make you feel better than dozens of shallow interactions
Boqolaal qof mar kaliya Kala hadal online-ka, sida ciyaaraha aad ciyaarto online-ka, waxay kaa luminayaan waqtigaaga, ku bartilmaamso waqtigaaga aad la sheekaysanayso asxaabta adigoo muhiimada u badan siinaya kuwa u muuqda inay yihiin kuwa ugu rajada dhow.
4. Xeeladda shukaansigu waa in aad khabiir ku tahay ugaadhsiga goobaha ay ku badan yihiin xulashada qofka aad rabto.
Dadka uu shukaansiga idin dhex maro ayaa ah kuwo aad kasoo xuleysid malaayiin qof
Noqo qof u shukaansi taga goobaha dadka qiimaha kuu leh ay joogaan, shukaansigu waa ciyaarta tirooyinka oo kale, soo raadi goobta halista ah ee ay taallo dheemantu, fogee sahankaaga, ha aaminin ganacsiga xayaysiiya in ay iibiyaan dheemanta kaligood, waa been oo sahal laguma helo qofka aad ka dhex dooranayso shukaansiga baraha bulshada.
5. Saaxiibo raadi ugu horayn
Xiriirka marka hore ka billow saaxiibtinnimo
Cilaaqaadyada ugu fiican waxay dhacaan markaad billowdo saaxiibtinimo kadibna aad isku bedesho shukaansi. Dabcan waxaa dhacda in aad si fiican u barato qofkaasi inta aadan shukaansan.
6. Noqo qof dabacsan
Ha u dhaqmin si qallafsan
Waxaad u malayn kartaa in aad ogtahay waxa ku soo jiidanaya, laakiin hadii aad xakamayso asaxaabtaada ama aad liis badan iska tuurto, waxaa laga yaaba in aad waydo qof muhiim kuu ah oo jaanis ku raadinayay in uu noqdo qofkaagii.
7. Noqo qof dagan oo macquul ah
Wax aadan raali ka ahayn ha sameynin
Hal dhibic oo ah barashada internetka maaha in aadan laheyn xiriiro caadi ah, sidaa darteed waxba kama ogid qofka kale, barashada dadka kuu barta jaanisyada lacagta ama xiriirrada aan muhiimka ahayn, waxaa halis ah in ay kuu horseedaan in aad go'aan ku gaarto tirtirista asxaabta wanaagsan ee aad leedahay.
Maxaa looga hadlayaa shirka Dhuusamareeb ee maamul goboleedyada?
Shirkan ayaa waxaa martigelinaya maamul markiisi hore lagu yaqiinay is-qabqabsi siyaasadeed
7 Luulyo 2020
Jaadka ayaa kamid ah waxyaabaha Kenya ay u dhoofiso Soomaaliya ee uu saameeyay corona
Aamina Mude: Aniga iyo ninkeyga Ben Kitili waan isku soo noqonay
Doorashada Soomaaliya: Ma ogtahay in gobolka Baay uu heysto kuraasta ugu badan ee baarlamaanka Soomaaliya
Waa kuma ninka laf dhuun gashay ku noqday Abiy Axmed?